Disco Ball - NYE Countdown yeJs, Vjs, Nightclubs 2019
musha / Specials Products / Disco Ball
Kirafu rakafuridzirwa DJ yevheti yevhidhiyo, ine dhiabhorosi uye shattering mirror madhara. Zita rako rinowoneka rakakura uye riri mutoro saka hakuna munhu acharasikirwa naro.
Customablezable with audio tags music beds taura nesu nezvemashoko.
Customized DJ video drop inoudza DJ yako zita. Yakakura semukana weDVD intro, sekushandura pakati pematokari kana yekuvhara sarudzo yako. Ita kuti vayeuke avo vanochengetedza sangano kuenda nekuunza zita renyu mberi uye nekuratidza ushingi hwedu, hutsvina hweD DJ huripo!